कस्तो रहला त सन् २०२१ ? «
कस्तो रहला त सन् २०२१ ?
प्रकाशित मिति : ११ पुष २०७७, शनिबार १६:४२
अंग्रेजी संवतको सन् २०२० हामीबाट विदा हुने तरखरमा छ । मृ’त्यु, नैरा’श्य र गहिरो अनिश्चिय पार गर्दै सुदूर क्षितिजमा आशाका किरणको प्रतीक्षामा विश्व छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा जिम्मेवार नयाँ नेतृत्वको उदय भइरहेको छ भने आज हाम्रा अघिल्तिर देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरुको लामो सूची छ । मानव निर्मित प्राकृतिक विपदको चक्र यथावत रहेकै छ, तर त्यो भन्दा पनि हामी मानवका कतिपय घातक एवं खतरनाक अभ्यास वा व्यवहारमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको प्रसार त्यतिकै अवश्य भएको होइन । युरोपेली आयोगमा विदेश मामिलाका निर्देशक मार्क लियोनार्डको भनाईमा चमेराबाट मानवमा कोरोनाभाइरस सर्नुमा प्राकृतिक वासस्थानमाथि व्यापक शहरीकरण र विध्वंसात्मक अतिक्रमणको उपज हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । साथै यो तिब्र गतिमा फैलिनुमा बढी औद्योगिकीकरण, उन्मादपूर्ण व्यापार र समकालीन यात्रा व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
साथै, यो सं’कटलाई समाधान गर्न मिलेर कार्य गर्नेतर्फ अझै पनि एकमत नदेखिनु बिडम्बना हो । तर कोरोनाभाइरसको कहर शुरु हुनुअघि नै विश्वव्यापी अस्थिरता प्रकट हुन थालिसकेको थियो । राष्ट्रवादी नेताको छबि बनाएका कैयौं नेताले विश्वका यावत समस्या समाधान गर्ने हौवा फिँजाएर मानिसलाई अझ दिग्भ्रमित बनाएका थिए ।
लियोनार्ड अगाडि भन्नुहुन्छ, “हो, यो वर्ष निकै कठिनाई पूर्ण रह्यो, तर सन् २०२१ मा खुशी हुनुपर्ने पाँच कारण छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय । तपाइँ हामी सुतेर उठ्दा ट्वीटरमा ट्रम्पले के भने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने दिन गएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिका चाँडै नयाँ र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा जाँदैछ ।
युरोपमा ट्रम्पकै पदचिह्न बोकेका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान र पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री जारोस्ल केजिन्स्की लङ्गडो झैं भइसकेका छन् । सन् २०२१ मा जर्मनी र सन् २०२२ मा फ्रान्समा हुने चुनावमा अब ट्रम्पेली मनोविज्ञान कमजोर हुनेछ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफूमा रहेको ट्रम्पकै जस्तो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन थालिसक्नु भएको छ ।
आशाको तेस्रो कारण जलवायूका क्षेत्रमा उत्साहप्रद समाचार आउनु । यस क्षेत्रका जानकार धेरैजसो व्यक्तिहरुले जलवायु परिवर्तनले कोभिड–१९ को भन्दा ठूलो सं’कट निम्त्याउने बताउँदै आएका छन् । तर यस वर्ष हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ७ प्रतिशतले कमी आएका कारण गरे हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौं । स्वच्छ ऊर्जातर्फ तिब्र संक्रमणका लागि प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने महसुस सर्वत्र भएको छ ।
चौथो, विश्वभर नै सरकारमाथिका भरोशा बढ्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को यस क्षणमा सार्वजनिक प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ भन्ने आमजनताले बुझ्न पाएका छन् । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि धेरैले के आशा गरेका थिए भने तत्कालीन नवउदारवादी रुढीवादिताले सामाजिक लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रमा राजनीतिक नियन्त्रण कायम हुनेछ । तर, त्यसको ठीक उल्टो कार्य भयो ।
टाट पल्टाइएका बैंकहरुमा सरकारी अनुदान दिइयो भने “धनीका लागि समाजवाद र गरिबका लागि पूँजीवाद” को मान्यता स्थापित भयो । यसैका कारण सिर्जित विवादबीच सरकारहरुले अन्ततः सार्वजनिक कल्याणका लागि बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न थाले । मुलधारका दलहरु जस्तै अमेरिकामा डेमोक्रेट पार्टीले श्रमिक र मध्यमवर्गीय मानिसलाई मद्दत गर्न थालेका थिए ।
विश्वमा सन् २०२१ खुशी ल्याउने वर्ष त्यतिकै हुनेवाला भने छैन । लियोनार्डले भनेझैं शक्ति सम्पन्न र धनी राष्ट्रले आफूमा रहेको प्रविधि र ज्ञान तेस्रो विश्वका गरिब राष्ट्रसम्म लैजान सके त्यसले सन् २०२१ मा खुशी अवश्य ल्याउने छ । खासगरी तेस्रो विश्वका गरिब राष्ट्रको पहिलो चाहना र आवश्यकता नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप हो । यो खोपको उपलब्धता र समानुपातिक वितरण अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।
विकसित मुलुकमा खोप लगाउने काम शुरु भइसकेका छन्, तर अति गरिब राष्ट्रहरु ती खोप आफ्नो मुलुकमा कसरी ल्याउने भन्नेमा अझै अन्यौल र अलमलकै अवस्थामा छन् । तुलनात्मक रुपमा निकै महंगा यी खोपहरु तेस्रो विश्वलाई उपलब्ध गराउन धनी एवं शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले उदार दृष्टिकोण र आर्थिक सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । (अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आधारित)